I-Alcatel 1X (2019) kunye neAlcatel 1C (2019): amanqaku kunye namaxabiso | I-Androidsis
Iselfowuni 1X (2019) kunye neAlcatel 1C (2019): I-TCL ibhengeza izixhobo ezimbini ezintsha kwi-CES 2019
El Umboniso wezoMbane zabaThengi (i-CES) 2019 yenziwe ngempumelelo eLas Vegas, eUnited States. Abavelisi abahlukeneyo bezixhobo babhengeze, bazisa kwaye basungula iimveliso ezahlukeneyo, njengoko kwenziwe ngoku yi-TLC, inkampani ephethe uphawu lweAlcatel.
Le femu ihlala ihlala ikhona kumnyhadala obalulekileyo, unyaka nonyaka. Ngesi sihlandlo, ii-smartphones ezimbini ezintsha zityhilwe ngabathethi babo. Sithetha ngayo Iselfowuni 1X (2019) kunye neAlcatel 1C (2019), ii-terminals ezimbini eziboniswa njengokuhlaziya ukwahluka kwazo kwakudala. Yazi!
1 Iselfowuni 1x (2019)
1.1 Ixabiso kunye nokufumaneka
2 Iselfowuni 1C (2019)
2.1 Ixabiso kunye nokufumaneka
Iselfowuni 1x (2019)
Eli lilandela le imodeli yonyaka ophelileyo. Imodeli entsha iza nenani lohlaziyo, ngokubhekisele kuyilo kunye nokubalulwa okuthile okubalulekileyo, kodwa ukuba ulindele ukuphucuka okubonakalayo kwintsebenzo, uya kudana iza neprosesa efanayo ye-Mediatek MT6739 esetyenziswe kwimodeli yangaphambili. Nangona kunjalo, i-SoC ngoku inesantya esiphezulu, i-1.5 GHz.Ngokunxulumene, iza ne-2 GB ye-RAM kunye ne-16 GB yendawo yokugcina yangaphakathi, enokwandiswa ngekhadi le-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-128 GB.
I-Alcatel 1x (2019) ngoku ine Inkulu kwaye ibukhali i-5.5-intshi ye-diagonal HD + ukubonisa nge-83% yomlinganiso wesikrini ukuya kumzimba. Oku kugutyungelwe yiglasi ka-Asahi's Dragontrail (2.5D). Inekhamera yangemva ye-13 MP, kodwa ngoku iyancediswa yi-2 MP yesibini inzwa yokubamba ubunzulu beenkcukacha zentsimi yemifanekiso eqingqiweyo.
Ikhamera engaphambili ye-8-megapixel kwimodeli yonyaka ophelileyo yatshintshelwa ngaphandle kwenzwa ye-5-megapixel exhasa ukwamkelwa kobuso; Ikhatshwa ngumbane we-LED. Kuya kubakho okwahlukileyo ngesikena somnwe esibekwe ngasemva kunye nesinye ngaphandle kwayo. Ifowuni iya kuba nenkxaso yeNFCI-SIM khadi ye-hybrid ezimbini (i-nano kuphela), i-Bluetooth 4.2 kunye nerediyo ye-FM.
I-1x (2019) isasasazwa kunye I-oreo ye-Android 8.1 Njengomanduleli wayo, kodwa iza nebhetri enkulu ye-3.000 mAh.
I-TCL izakuyisungula ifowuni e-Afrika, eYurophu, kuMbindi Mpuma nakuMntla Merika kamva kule kota kwaye Iya kuthengiswa nge-120 euros, nangona iinkcukacha ezithe kratya malunga nomhla ngqo wokuthengisa kulindeleke.
Iya kufumaneka kwiLitye leLitye eliLuhlaza kunye noLwandle oluMnyama ekugqityweni okuqala ukukrwela kunye nokutyibilika okunganyangekiyo kunye nokufihla iminwe yeminwe.
Iselfowuni 1C (2019)
Iselfowuni 1C (2019) yifowuni yedemure ngakumbi nge-Android Go njengenkqubo yokusebenza. Le modeli iza nefayile ye- 5 intshi ubude bekhusi, ebonelela ngesisombululo sama-pixels angama-960 x 48 kunye nomlinganiselo we-18: 90. Ikwagutyungelwe kwiglasi ye-2.5D Dragontrail kwaye ine-micro-textured finish ngasemva enganyangekiyo kwaye inikezela ukubambelela okuhle esandleni.
I-1C inikwe amandla yi-Spreadtrum SC7731E, iprosesa ye-quad-core enesantya esona santya siphezulu se-1.3 GHz.Kukho i-1 GB ye-RAM kunye ne-8 GB yendawo yokugcina-enokwandiswa nge-microSD ukuya kuthi ga kuma-32 GB ubuninzi. Ikhamera engasemva sisisombululo se-5 MP esisombulula isigxina, nge-f / 2.4 ukuvula, edityaniswe kwi-8 MP, ngelixa ikhamera engaphambili inzwa ye-2 MP itolikwe kwi-5 MP. Kukho uninzi lweendlela zekhamera, kubandakanya iMowudi yeNtlalontle, eyenza ukuba kube lula ukwabelana ngemidiya yoluntu.
Isiphelo sinenkxaso ye-SIM ezimbini (i-nano kuphela), i-Bluetooth 4.2 kunye ne-2.4 GHz iWi-Fi.Kwaye yona ine-2,000 mAh amandla ebhetri ngaphandle kwenkxaso yokutshaja ngokukhawuleza. Ikwaxhasa nonxibelelwano lwe4G LTEkodwa inonomathotholo we-FM, i-3.5mm yejack audio, kunye nefleshi ye-LED. Ibaleka kwi-Android 8.1 Oreo (Go Edition) kwaye iya kufumaneka kwiVolcano Black kunye ne-Enamel Blue.
I-Alcatel 1C (2019) inexabiso nge-70 euro kwaye iza kuphehlelelwa kwiimarike zaseAsia, Latin America, Middle East, Afrika naseYurophu. Njengoko kunokubonwa, ukubakho kwayo kuya kubakho kwihlabathi liphela. Izakufika kungekudala, nangona ingaziwa ncam ukuba iza kufika nini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Iselfowuni 1X (2019) kunye neAlcatel 1C (2019): I-TCL ibhengeza izixhobo ezimbini ezintsha kwi-CES 2019
Ukuba kwinqanaba lokungenela abanayo into yokuziva "betshiphu". Indawo yeAlcatel, eqhubeka nokukhathalela kakhulu uyilo lweetheminali zayo.
Ngokumalunga neempawu zobuchwephesha, ngeli xabiso zibonakala ngathi zinomdla wokukhetha umsebenzisi ofuna iselfowuni esilula nesinexabiso eliphantsi eqhuba kakuhle.
I-Bixby iya kudibanisa usetyenziso lukaGoogle
I-Android Q iya kuvula ifomathi yemiyalezo ye-RCS kubaphuhlisi bomntu wesithathu